Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fitsipika fanoratana sora-bavety
KMS 2018 KMS 2017
MNT 2018 MNT 2017 MNT 2016
Baraingo Faingo Fanoratana Isa Farango Sosona Fifampiresahana Fononteny Hoy Izy Sora-baventy Sora-mandry Teboka Teboka Amam-paingo Teboka Roa Teboka Telo Teny Maivana Tsoraka
Taratra 121118 Taratra 261018
KHT / /
Ireto ambany ireto ny fitsipika arahina rehefa manoratra sora-baventy.
1 - Rehefa manomboka fehezanteny dia atao sora-baventy.
- Mahafinaritra ny manoratra teny Malagasy.
- Manendrika anao ilay akanjo.
2 - Ireo teny manan-danja eo amin'ny lohateny dia azo atao sora-baventy.
- Tantara Mampiseho ny Fanjakana Nifandimby Teto Madagasikara.
- Torohevitra Momba ny Fifandraisana eo amin'ny Tanora Lahy sy Vavy.
- Koloiko sy Hajaiko ny Teniko.
3 - Ny anaran'olona sy anaran-tanàna dia manomboka amin'ny sora-baventy.
- Misakafo i Rasoa mianaka.
- Lasa any Toamasina i dadanay.
4 - Ny anaran'ireo planeta dia manomboka amin'ny sora-baventy raha toa ka miseho miaraka ao anaty fehezanteny iray izy ireo. Raha toa kosa ka mandeha tsirairay dia manomboka amin'ny sora-madinika.
- Rehefa amin'ny fotoanan'ny eklipsa dia milahatra ny Volana, ny Tany, ary ny Masoandro.
- Mahafinaritra ahy ny fiainana eto amin'ity tany ity.
- Mibaliaka ny volana androany.
5 - Ny anaran'ireo andro ao anatin'ny herinandro, ny anaran'ny volana, ary ny anaran'ireo fety malaza dia manomboka amin'ny sora-baventy.
- Mandalo any aminao aho amin'ny Alatsinainy.
- Mafana be aty aminay isaky ny volana Janoary.
- Efa ho avy izao ny Krisimasy sy ny Taom-baovao.
Ny anaran'ireo vanim-potoana efatra, izany hoe ny fahavaratra, ririnina, lohataona, ary fararano dia manomboka amin'ny sora-madinika.
6 - Ireo toe-java-nitranga manan-tantara dia manomboka amin'ny sora-baventy.
- Ady Lehibe I.
- Ady Lehibe II.
- Ady Mangatsiaka.
7 - Ny anarana foko, zom-pirenena, fitenim-pirenena dia manomboka amin'ny sora-baventy.
Ny teny hoe malagasy dia manomboka amin'ny sora-madinika raha toa ka ampiasaina ho mpamaritra. Ohatra: orinasa malagasy, sakafo malagasy, sns.
8 - Ankoatr'ireo taranja mikasika ny tenim-pirenena, ny anarana taranja any am-pianarana na ireo sampam-pampianarana eny amin'ny ambarantonga ambony dia manomboka amin'ny sora-madinika.
- Ny taranja nandraisako anjara tamin'ilay fifaninanana dia matematika sy fizika.
- Sampam-pianarana Malagasy sy Anglisy no ataony any Maninday.
9 - Ny anarana vokatra mampalaza orinasa iray dia manomboka amin'ny sora-baventy.
10 - Ny teny hoe Neny, Dada, Dadabe, Dadatoa, Bebe, sns. dia manomboka amin'ny sora-baventy. Ny teny hoe neninay, dadanay, dadabenay, dadatoanay, bebenay, sns. kosa dia manomboka amin'ny sora-madinika.
- Handeha hamangy an'i Dadatoa aho rahampitso.
- Handeha hamangy an'i dadatoanay aho rahampitso.
- Efa sitrana ve i mamanareo?
11 - Ny anarana fiangonana, na teny mifandraika amin'ny fivavahana dia manomboka amin'ny sora-baventy.
12 - Ireo teny misy ifandraisany amin'Andriamanitra dia manomboka amin'ny sora-baventy.
- Izay mino Azy no ho vonjena. (Manomboka amin'ny sora-baventy ny Azy satria entina ilazana an'Andriamanitra.)
13 - Ny anaram-boninahitra entin'ny olona iray eo amin'ny sehatry ny asa na resaka pôlitika dia manomboka amin'ny sora-baventy raha toa ka mipetraka eo alohan'ny anaran'ilay olona, saingy manomboka amin'ny sora-madinika kosa raha eo aorian'ny anarany.
- Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
- Hery Rajaonarimampianina, filoha am-perin'asa.
- Dokotera Rajosoa.
- Rajosoa, dokotera mpadidy.
14 - Ny teny hoe Aterineto dia manomboka amin'ny sora-baventy foana.
- Tao amin'ny Aterineto no nahitako ilay tolotr'asa.
15 - Fadio ny manao sora-baventy raha misy teny tiana hamafisina. Ny fanaovana sora-baventy amin'io tranga io dia toa mihevitra ny mpamaky ho pahina ka mila atao mivandravandra ilay teny izay vao hitany. Sora-mandry no ampiasaina rehefa misy teny tiana hamafisina.
- AZA DIA MIZATRA MAMPIASA SORA-BAVENTY RE TOMPOKO AZAFADY NA DIA MISY TENY TIANAREO HAMAFISINA MAFY AZA!
Raha te hahazo vaovao tsy tapaka mikasika ireo hetsika karakarain'ny KHT ianao dia misorata anarana eto ambany. Ampidiro eto ny adiresy mailaka ahafahana mifandray aminao.
Ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) dia vondron'olon-tsotra manao ezaka manokana mba hamerenana amin'ny hasiny ny teny Malagasy.
Librairie Antso FJKM
Institution FJKM Rainandriamampandry
Radio Nasionaly Malagasy
© 2018 KHT | Fifandraisana | Momba Anay | Design by W3Layouts